laptop အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Moe Thu Kyaw
#Engineer တွေ AutoCAD, Revit, 3ds Max, Sketchup , Etabs အတွက်ရော
#Designer တွေအတွက်ရော အဆင်ပြေစေမျာပါ။
အသေးစိပ် မေးမြန်း စုံစမ်းချင်လျှင်တော့ အောက်က ဖုန်းကိုသာ ခေါ်လိုက်ပါ။
Call Now! 09790 941 535
Very Simple, Good Performance, Get Now !
#MGALaptop #ComputerMyanmar #Buy_Laptop #laptopmyanmar
အမှတ် ၁၉ ဘီ၊ စံရိပ်ငြိမ် ၂ လမ်း၊ ကမာရွတ် လှည်းတန်း။